एकसाथ दृष्टिकोण, सुपारी र नेपथ्य – Sourya Online
एकसाथ दृष्टिकोण, सुपारी र नेपथ्य
सौर्य अनलाइन २०७० जेठ २४ गते ३:४५ मा प्रकाशित
काठमाडौं : चलचित्र सिंगल रिलिज होस् भन्ने चाहना हरेक निर्मातामा हुन्छ । तर, हाम्रो विडम्बना भनौँ वा के भनौँ निर्माताहरूले एक मात्र चलचित्रको रिलिज गर्न नै पाएका छैनन् । यो त अचेल उनीहरूको कल्पनामा मात्र सीमित भएको छ । यस्तै यो साता अर्थात् आज शुक्रबार तीन नयाँ चलचित्र सार्वजनिक प्रदर्शनमा आउने भएका छन् ।
चलचित्र हुन्, ‘दृिष्टकोण,’ ‘सुपारी,’ र ‘नेपथ्य’ । ‘दृष्टिकोण’ तुलसी घिमिरेको निर्देशनमा बनेको चलचित्र हो भने ‘सुपारी’ मा शिव घिमिरेको निर्देशन छ । त्यस्तै, ‘नेपथ्य’ रामराजा दहालको निर्देशनमा तयार भएको छ । दृष्टिकोणलाई नेपाली चलचित्रका राम्रा तथा पाका निर्देशक तुलसी घिमिरेले तयार पारेका हुन् । केही समयको ग्यापपछि निर्देशक घिमिरे यो चलचित्रमार्फत देखिएका हुन् । यो बीचमा नेपाली चलचित्र किन चलेनन् ? के कमी भयो ? भन्ने लामो अनुसन्धानपछि मात्र ‘दृष्टिकोण’ आफूले तयार पारेको निर्देशक घिमिरेले बताए । दर्पण छायाँपछि कुनै पनि व्यावसायिक चलचित्र दिन नसकेका घिमिरेले यो चलचित्रले त्यसको रेकर्ड बनाउने विश्वास लिएका छन् ।
मान्छेले हेर्ने हरेक दृष्टिकोण फरकतवरले कथामा प्रस्तुत गरिएको चलचित्रमा जीवन जिउने आ–आफ्नै शैली र कला हुन्छन् भन्ने विषयवस्तुमा चलचित्र बनाइएको छ । मञ्जुमिता फिल्मस्को ब्यानरमा निर्माण भएको चलचित्रको निर्माण एल लामा, ममता गजमेर र राजु धामीले गरेका हुन् ।
चलचित्रमा कुनाल, हिमानी, ममता गजमेर, भारती घिमिरे, मदन भुजेल, प्रतिमा, ललिता गोलेलगायतका कलाकारको अभिनय छ । चलचित्रलाई निर्देशक घिमिरेले नै लेखेका हुन् । बिबी अनुरागीको संगीत रहेको यस चलचित्रमा घिमिरे र युवा गीतकार सुमन श्रापितका गीत छन् । सांगीतिक रूपमा बलियो मानिएको यो चलचित्र देशव्यापी सार्वजनिक प्रदर्शनमा आएको हो ।
सुपारी हेराकुमार शाहीले निर्माण गरेको चलचित्र हो । शुभ अवसरका लागि निम्तो दिन वा लिन प्रयोग गरिने सुपारीको प्रयोग यसचलचित्रमा मारकाटका दृश्य जनाउन प्रयोग गरिएको छ ।
गजित विष्ट, झरना थापा, सपना केसी, शरण डंगोल, विकेश शाहीलगायत कलाकारको अभिनय हेर्न पाइनेछ । निर्देशक घिमिरेकै कथा रहेको चलचित्रमा राजेन्द्र श्रेष्ठ र सूर्य किरणले संगीत दिएका छन् भने छायांकन महेन्द्र थापाले गरेका हुन् । काठमाडौं, सिन्धुपाल्चोक र चितवनलगायत स्थानमा छायांकन गरिएको चलचित्र एक्सनप्रधान रहेको निर्माण पक्षले जानकारी गराएको छ ।
त्यस्तै आजैबाट प्रदर्शनमा आएको अर्काे चलचित्र ‘नेपथ्य’दर्शकलाई कन्फ्युजमा पारिएको चलचित्र हो । नेपथ्य सांगीतिक ब्यान्डले दर्शकको माया पाए जस्तै चलचित्रले पनि पाउँछ भन्ने हेतुले निर्माण गरिएको छ । चलचित्रका विषयमा नेपथ्य ब्यान्डले आफ्नो कुनै सरोकार नरहेकाले नझुक्किन दर्शकमा अनुरोध समेत गरेको छ । नामको विषय यसका निर्माता निर्देशक रामराजा दाहालले नेपथ्य ब्यान्डसामु माफीसमेत मागेका छन् ।
चलचित्रमा विल्शनविक्रम राई, आदित्य बुढाथोकी, रेम विक, मानव सुवेदी, सोना तिमिल्सिना, रवि गिरी, रश्मी भट्टलगायतको अभिनय छ । शुभाससिंह बस्न्यातको लेखन रहेको यस चलचित्रलाई सुशन प्रजापतीले छायांकन गरेका हुन् । यिनै सुसानले छायांकन गरेको चलचित्र साँघुरोका अधिकांश दृष्य धमिला थिए । (सौस)